बिबिध Archives | Page2of 103 | Nepalese.org - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actoress, Audio, Video, Interview
विश्वकै सेक्सी एयरहोस्टेज भएका ४ एयरलाइन्स, यात्रासंगै मस्ती पनि !
सवारीसाधनमा यात्रा गर्दा संगैको सिटमा ब्युटीफुल तरुनी परोस भन्ने धेरै केटाहरुको चाहना हुन्छ । केटाहरु मात्रै होइन केटीहरु पनि संगैको साथी राम्रो र रमाइलो गफ गर्न मन पराउने खालको होस् भन्ने च... Read more
समुन्द्रशास्त्र : कस्ता युवती कति भाग्यशाली ?
ज्योतिशास्त्रको एउटा शाखा समुन्द्र विज्ञानमा शरीरमा भएका चिन्हका आधारमा ब्यक्तिको भविष्यको विश्लेषण गरिन्छ । शरीरमा पाइएका यस्ता निशानाहरु हाम्रो भविष्य र चरित्रका बारे धेरै कुरामा बताउँछन्... Read more
बिहेको त्यो रात ! जब उनी सुक्क सुक्क गरेर रुन थालिन्
बिहेको दिन डोलि अनमाई कार भित्र दुलई राखियो । म पनि उनी सँगै गाडि भित्र पसे । उनका साथीहरु बाहिरबाट कोई वाई वाई को इसारा, कोहि रुदै त कोहि बेहुलिलाई हसाउदै थिए।मलाई पनि आफ्ना साथीहरुले हसाँई... Read more
यसरी टुंगियाे हाम्राे प्रेमकाे अधुराे कहानी (कथा)
रात भएकाले ठ्याक्कै त थाहा भएन कहाँ हो। तर, त्रिशुली किनारमा पहाडको बाटो हुँदै हुँइकिएको रात्रिबस एउटा सानो शहरको बिचमा लामो जाममा पर्यो। सानो ब्याग भिरेर बसबाट ओर्लेर नजिकैको चिया पसलमा गएँ... Read more
तपाईं कसरी सुत्नुहुन्छ ? जान्नुस् आफ्नो व्यक्तित्व
खाने पिउने जस्तै निदाउनु पनि हरकोहीको जीवनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो । दैनिक आठ घन्टाको निद्राको हिसाबले हेर्दा धेरैजसो मानिसहरु आफ्नो जीवनक एक तिहाई भाग त सुतेरै बिताउँछन् । हरकोही... Read more
महिलाका सबैभन्दा संवेदनशील ९ अंगहरु यस्ता हुन्छन् !
१ कम्मर: महिलाको कम्मर पुरुषको सबैभन्दा आँखा पर्ने स्थान हो । पातलो कम्मर हुने महिलाको सुन्दरताबारे सदियौं देखि चर्चा हुँदै आएको छ । बारुली कम्मर चलाउँदा पुरुष र महिला दुवैले रोमान्चित अनुभव... Read more
महिलाले मोबाइलमा सवैभन्दा बढी यस्ता कुरा हेर्दा रहेछन् !
स्मार्टफोनमा आफूले चाहेको सामाग्री इन्टरनेटको सहायतामा हेर्न सकिन्छ । एक अध्ययनका अनुसार पुरुष भन्दा महिलाले स्मार्टफोनमा अश्लिल सामाग्री बढी हेर्ने गरेको तथ्य सार्जजनिक भएको छ । पोर्न साइट... Read more
के तपाईको स्तन आकर्षक छैन ? छैनभने आकर्षक यसरी बनाउनुहोस्
एजेन्सी – महिलाको समग्र सौन्दर्यको एउटा हिस्सा स्तन एवं वक्षस्थल हो । यद्यपी स्तनको बनौटले त्यो कुराको निर्धारण गर्छ, त्यो आकर्षक छरछैन भन्ने कुरा । सौन्दर्यको मानक अनुसार स्तन कस्तो ह... Read more